ड्राइङ रूममा कुखुरो – मझेरी डट कम
‘हुँ ….!’ पाइपको धुवाँ उडाउनमा व्यस्त थिए उनी ।
‘हुँ …! एक पटक फेरि ध्वनित गरेर प्रोफेसर साबले धुवाँका साथ अगाडिको भित्तामा हेरे । उनको ड्राइङगमको भित्ता तस्वीरै–तस्वीरले ढाकिएको थियो । सामुन्ने गोलो चस्माबाट एकनासले हेरिरहेका महात्मा गान्धी भनेसँगै घना दाह्री–जुँगाका महान् सर्वहारावादी दार्शनिक कार्लमाक्र्स । केही पर दुब्लो–पात्लो कायाका वीपीको निस्फिक्रीसँग मुस्कुराइरहेको तस्वीर थियो भने अर्कोतिर राजदण्डसहित उभिएका महेन्द्र दम्पति । एउटा अपेक्षाकृत ठूलो फ्रेममा राजा वीरेन्द्रसँग उभिएका हँसिलो प्रोफेसरसाब । यसैसँग जोडिएको स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रङ्गीन तस्वीर पनि । याद रहोस्, गिरिजा बाबुको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक महत्वपूर्ण सल्लाहकार थिए । तर गोप्य प्रकारका । यस सम्बन्धमा हल्ला के चलेको थियो भने प्रधानमन्त्री गिरिजा र उनका पिएहरू प्रोफेसर साबसँग डाइरेक्ट सल्लाह लिइरहन्थे रे ।
‘तर सर….।’ मेरो कुरालाई तत्कालै काटेर प्रोफेसर साबले भने, ‘तिमी मोडर्न सोसल साइन्सको बेसिक कुरामै क्लियर छैनौ । तिमीले बढी से बढी अध्ययन–मनन गर्नु आवश्यक छ । म तिमीलाई केही लेटेस्ट किताब सजेष्ट गर्छु, राम्ररी पढ । कन्जरभेटिभ हिसाब–किताबले अघि बढ्ने हो भने तिम्रो थेसिस कम्प्लिट हुने म देख्दिन ।’ प्रोफेसर साबले निभिसकेको पाइपमा आगो दिएर भने, ‘म तिमीलाई आफ्नो कलेक्सनबाट केही किताब दिन्छु ।’
‘हो, बाल्टिमोर युनिभर्सिटीले मलाई सम्मान गर्ने भएको छ ।‘ उनको बोलीमा प्रसन्नता थियो, ‘म जनवरीमा त्यतातिर……।’ प्रोफेसर साबले यति के भनेका थिए, एउटा कुखुरो सहसा भित्र पस्यो । र ड्राइङरुममा प्वाँख फर्फराउँदै यताउता गर्न थाल्यो । यो देखेर प्रोफेसर साबको मुहुडाको आकृति बिग्रियो । उनले एउटा फोहोर गाली गर्दै भने, ‘हेर न छिमेकीको कुखुरा हो । यसरी खुला तरिकाले नै कुखुरा–सुखुरा पाल्छ ।’ अर्को फोहोर गाली थप्दै भने, ‘तल्लो जातको हो । यस्तै दुःख दिइरहन्छ । यसरी छाडा रूपमा कुखुरा, हाँस नपालभन्दा मान्दै–मान्दैन । साले, अनटचेबल…..।’ नेपालको विश्वविद्यालीय जगत्का कहलिएका समाजविज्ञानी मनिषी प्रोफेसरसाब अत्यन्त क्रुद्ध भएर पाइपको धुवाँ बुङबुङ्ती छाड्न थाले । अहिले प्रोफेसर साबको छिमेकीको कुखुराको भाले ड्राइङरुमबाट निस्केर बाहिर शानले रातो कल्की हल्लाउँदै पर्खालमा बसेको थियो ।